आजको राशिफल – असार ३० गते शनिबार (भिडियो सहित) - Pokhara News
आजको राशिफल – असार ३० गते शनिबार (भिडियो सहित)
- पोखरा न्युज असार ३०, २०७५ - समय ०८:१८ 2018-07-14
वि.सं. २०७५ असार ३० गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ जुलाई १४ तारिख,
असार शुक्ल प्रतिपदा, पुष्य (तिष्य) नक्षत्र, कर्कट राशिको चन्द्रमा, हर्षण योग, बब र बालब करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : चन्द्रोदय, श्री जगन्नाथ रथयात्रा,
आजको मूहुर्त : द्रव्यप्रयोग वा लगानी,
भोलिको मूहुर्त : ब्रतबन्ध (उपनयन),
राहु काल : बिहान ०८:४४ देखि १०:२६ सम्म
यमघण्ट : दिउँसो ०१:५२ देखि ०३:३५ सम्म
गुलिक काल : बिहान ०५:१८ देखि ०७:०१ सम्म
काल वारवेला : बिहान ०५:१८ देखि ०७:०१ सम्म र साँझ ०५:१७ देखि ०८:१७ सम्म
शुभ वारवेला : बिहान ०७:०१ देखि ०८:४४ सम्म
अमृत वारवेला : दिउँसो ०३:३५ देखि ०५:१७ सम्म
भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य (उत्तरपश्चिम) र ईशान (उत्तरपूर्व) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने पान वा घिउ खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
घरपरिवारका कामधन्दामा सधैंभन्दा बढी खट्ने समय छ । मिहिनेत आफूले गर्नुपर्ने तर जस अर्कैले पाउने कमजोर दिन छ, आज । नोकरी वा व्यवसायका क्षेत्रमा देखापर्ने समस्यामा केन्द्रित हुनाले दिन बितेको पत्तो पाइँदैन । आँफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तित्व अथवा हाकिम, मातापिताका साथमा चित्त नबुझ्न सक्छ । मातापिता र अभिभावकवर्गको सेवासुश्रुषामा समय दिनु राम्रो हुन्छ । बन्दव्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा भनेजस्तो अनुकूलता देखिंदैन । ठूलाबडाको निर्णयमा दोधारेपन देखिने छ । झिनामसिना श्रममूलक कामले अल्मल्याउन सक्छ । नयाँ कामप्रति मनमा धारणा पलाए पनि कार्यान्वयन नगर्नु नै बेस हुन्छ ।
छैंटौं भावमा चन्द्रमा रहेकाले तर्क, विवाद र झैझडामा दिलचस्पी दिनु हुँदैन । प्रतिस्पर्धात्मक समय छ । पेसागत वा व्यवसायिक जीवनमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ । ऋणसापटी लिनदिन आजको दिन अनुकूल हुँदैन । आर्थिक समस्याले तनाव उत्पन्न हुनसक्छ । ज्ञानगुन र पठनपाठनको क्षेत्रमा मन जाँदैन् । सहयोगी हातहरू पछि हट्न सक्छन्, आफन्तले समेत कुरा सुन्न र समय दिन सक्दैनन् । प्रणयसम्बन्धमा पनि चिसोपन देखिनसक्छ । सोचेका कामहरू ढिलो गरी सम्पादन हुनेछन् । बन्दव्यापार र साझेदारीबाट फाइदा हुने छैन । व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्छ ।
पोखरा न्युज श्रावण ७, २०७५ - समय ०८:४१ 2018-07-23
आजको राशिफल – साउन ०५ गते शनिबार (भिडियो सहित)
पोखरा न्युज श्रावण ५, २०७५ - समय ०८:४९ 2018-07-21